Xafiiska Minimalist - Tilmaamaha si aad uga abuurto xoq | Ragga Stylish
Sida loo abuuro xafiis yar oo casri ah
Haddii aad dareento culeys kaliya inaad cag dhigeyso xafiiskaaga, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii isbedelka qurxinta. Abuuritaanka xafiis aad u yar ayaa ku siin doonta nabad iyo xasillooni. Intaas waxaa sii dheer, waxay ka caawineysaa boosaska inay u muuqdaan kuwo ka weyn, marka haddii goobtaada shaqo aysan lahayn mitir laba jibbaaran, halkaas waxaad ku haysataa sabab kale oo aad ku doorto qaabkan qurxinta
Ka bilow wax cad: derbiyada midab cad. Waad rinjiyeyn kartaa xoogaa cagaar ah ama buluug ah haddii qol gebi ahaanba cad uu aad kuugu murugaysan yahay, in kastoo gadaal laga soo sheegi doono sida nolosha loogu dhex neefsado.
Jawiga ugu yar ma jiro waligeed iftiin aad u badan. Marka laga reebo laambada weyn, rakib qaar ka mid ah daahyada translucent (taas oo kaa caawin doonta inaad ka faa'iideysato iftiinka dabiiciga ah iyo keydinta biilka korantada). Si kastaba ha noqotee, waa inaad sidoo kale u diyaar garowdaa saacadaha qorrax dhaca ka dib iyo maalmaha qorraxdu aysan ka ifayn miisaska iyo laambadaha dhulka. Inta aad u baahan tahay dhig ama meel bannaan ayaa kuu bannaan. Ugu dambeyn, waxay u isticmaashaa nalal isku dhafan oo loogu tala galay buugaagta buugta lagu keydiyo iyo armaajo dul sabeynaya.
Iibso alaab guri leh khadad nadiif ah (looma baahna inay caddaan yihiin), taas oo shaqadoodu ka sarreyso qurxinta iyo inay kuugu adeegaan ujeedooyin kala duwan. Ka fikir ka faa'iideysiga ugu yar. Raacida falsafadan ayaa kaa takhalusi doonta alaabta guriga ee aan waxtar lahayn waxayna kaa badbaadin doontaa boos fara badan, taasoo ka dhigaysa xafiiskaaga mid ka weyn.
Marka ay timaado kuraasta, u tag naqshadaha casriga ah halkii aad ka heli lahayd kursiga caadiga ah ee xafiiska. Kursi hal abuur leh ayaa u adeegi doona kordhinta dareenka mustaqbalka ee xafiiskaaga minimalist oo ka yaabso macaamiishaada meel xiiso leh oo gaar ah.
U tag birta aan lahayn ee alaabadaas yar lagama maarmaanka u ah xafiis, sida darmuuska kafeega iyo dhalada qalimaanta. Waxyaabaha kale oo dhan, sida muraayadaha iyo weelka, u isticmaal galaas. Sidan ayaad ku abuuri doontaa jawi nadiif ah oo xarrago leh. Haddii ay tahay inaad u isticmaasho caag wax, ka dhig mid cad ama cawl.
Ugu dambeyntiina, nolosha ku neefso xafiiskaaga adigoo qaar dhigaya dhirta halkan iyo halkaas. Ama haddii aad doorbideyso, waxaad iibsan kartaa mid ka weyn oo aad dhigtaa meel la doorbido, halkaasoo ay ku dareyso midab iyo dareen dabiici ah qolka oo dhan. Kudar rinji aan la taaban karin oo midabbo dhalaalaya u leh dhirta haddii aad dareento in xafiisku u baahan yahay xitaa firfircooni dheeraad ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Sida loo abuuro xafiis yar oo casri ah
Saddexda nooc ee shaati gacmo-gaaban iyo sida la isugu daro
Dacwadaha buluuga ah ayaa dhammaantood ka careysan dadka caanka ah